Paris Saint Germain oo ciyaartoyda Juventus ka dhex heshay badalka Neymar Jr & Man United oo kula dagaalameysa. – Gool FM
(Paris) 20 Luulyo 2019. Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa iney calaameysatay xiddigii ay badalka uga dhigi laheyd Neymar Junior hadii uu isaga tago magaalada Paris, xilli warbaahinta qaarkood ay baahiyeen in xiddiga reer Brazil uu kooxdiisa u sheegay go’aankiisa ku aadan mustaqbalkiisa.
Neymar wuxuu noqday laba sano ka hor xiddigii ugu qaalisanaa kubadda cagta maadaama uu 222 Malyan oo Yuuro ku tagay Parc des Princess, balse haatan wuxuu kooxdiisa u sheegay inuu doonayo dib ugu laabashada Camp Nou.
Iyadoo ay taasi jirto ayey hadana warbaahinta Catalonia baahiyeen in Balaugrana ay diyaar la tahay adduun dhan 100 Malyan oo Yuuro oo la raaciyay laba xiddig oo ay xulan doonto kooxda Paris, balse kama dhex baxsana shanta xiddig ee kala ah: Coutinho, Dembele, Rakitic, Semedo iyo Malcom.
Paris Saint Germain diyaar uma ahan iney ka jawaabto dalabka kasoo yeeraya Balaugrana, Mirror ayaana qireysa in kooxda reer France ay markaan badalka Neymar ka dhex heshay kooxda Juventus.
PSG waxey markaan eegatay Paulo Dybala oo la fahamsan yahay inuusan boos joogto ah ka heli doonin kooxda uu isku dubaridi doono fasalka bilaaban doona Maurizio Sarri, sidoo kale Red Devils ayaa dhinac ka dooneysa xiddiga reer Argentina.
Dhinaca kale warbaahinta talyaaniga waxey qoreen isbuucii hore in aabaha dhalay Neymar uu maamulka Juventus ka codsaday iney xiddigooda u ogolaadaan kusoo biiritaanka kooxda, walow aan la ogeyn sida ay u xamili karto kooxda marwada duqda ah saxiixa Neymar.
Xiisaha Dybala ee Paris Saint Germain waxey furi kartaa waddo kale oo ay arrinta Neymar uga macaamilaan labada kooxood ee PSG iyo Juventus.
Xiddigii ugu fiicnaa, gooldhaliyihii ugu sarreeyey & Sida loogu kala guuleystay abaal-marinnada koobka qarammada qaaradda Afrika 2019